I-Primobolan yindlela esetyenziswa kakhulu kwi-anabolic steroid ekunqumeni imijikelezo ye-steroid
/Blog/Pregabalin/I-Primobolan yindlela esetyenziswa kakhulu kwi-anabolic steroid ekunqumeni imijikelezo ye-steroid
ezaposwa ngomhla 12 / 12 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Pregabalin.
1.Yintoni i-Primobolan? 2.Iziphumo ze-Primobolan
Iimpawu ze-3.Primobolan kunye nokuSebenza I-4.Primobolan Iinkalo kunye noLawulo
5.Primo yokuBhikisha okanye ukuCoca 6.Stack Primoblan
7.Primobolan Kubafazi 8.Primobolan Side Effects
9.Ukuphi ukuthenga i-Primobolan yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi?
(I-Methenolone Acetate) I-Primobolan i-powder video
|. (I-Methenolone Acetate) i-Primobolan powder eluhlaza Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-Methenolone Acetate / Primobolan
I-molecular Formula: C22H32O3
Isisindo somzimba: 344.48800
Primobolan ligama lebhizinisi le-anabolic steroid Methenolone (nayo ibhaliwe njenge-Metenolone). Itholakala kwintlobo yesistim e-injini esekelwe, kunye nefom yomlomo. I-Primobolan injectable iyaziwa I-Methenolone Enanthate, kwaye ifomathi yomlomo iyaziwa I-Methenolone Acetate. I-anabolic steroid eyaziwa kakhulu kwaye iyaziwayo ngenxa yobunjani bayo obunobumnandi obufana ne-anabolic kunye ne-androgenic.
I-Primobolan yi-anabolic steroid yomlomo eyingqayizivele encane xa kuthelekiswa nabaninzi oral anabolic steroids. Ngaphambi kokuba siphumelele, kubalulekile ukuba sikwazi ukwahlula umehluko phakathi kwePhermobolan kunye ne-Primobolan Depot. I-Primobolan Depot yinguqulo ejoyiweyo yehomoni eqhotyoshelwe kwi-esanthate ester enkulu / ende. I-Primobolan iqulethwe i-hormone esebenzayo efanayo kwi-Methenolone; Nangona kunjalo, ifakwe kwi-ester encinci / emfutshane ye-Acetate ester kwaye yenzelwe ukulawulwa komlomo.
I-Primobolan ithathwa njengenye ye i-anabolic steroids ephephile kwiimarike kwaye inomlinganiselo okhuselekileyo wokhuseleko ukubuyisela le mabango. Enyanisweni, le steroid isetyenziselwe ngempumelelo ukuphatha abantwana abangaphantsi kobungqina kunye neentsana ezingenakulinganiswa ngaphandle kokulimala. Kuye kwanyelwe ukuba i-osteoporosis kunye ne-sarcopenia. Nangona kunjalo, injongo ephambili ye-Primobolan iyayiphatha imisipha yokuchitha izifo kunye nokutyhila ixesha elide kwiimononi ze-corticoid. Kuye kwabonakaliswa ukuba iphumelele kakhulu ekuphatheni ukungondleki.
Ukudlala indima ebalulekileyo kwizicwangciso zokonyango, uPramobolan ungokoqobo i-anabolic steroid ethandwa phakathi kwabadlali abaphucula ukusebenza. Nangona kunjalo, inguqu yeDepot injected kakhulu kakhulu njengoko iinguqulelo yomlomo ipakisha i-punch ebuthakathaka. Kubafundi bomzimba, injectable i-Methenolone Acetate yifom ekhethiweyo kodwa i-Acetate version ingenakunzima kakhulu ukuyifumana. Ukongezelela, i-hormone ye-Methenolone ngokwayo, ngelixa iqhelekileyo kwifom yomlomo ingenye ye-anabolic steroids ephangaleleyo. Kwakhona kubiza kakhulu kwiimarike ezininzi zasemhlabeni. Le hormone iyaziwa ngokuba yenye yeintandokazi zikaArnold Schwarzenegger. Ingakanani inyaniso kukuba nguye kuphela onokuthi, kodwa ibali lanele ukuba abaninzi benze izicamango ezingalunganga malunga neemvakalelo zakhe kwi-hormone nendlela awasebenzisa ngayo. Oko siyazi. Kwakwaneleyo ukuba kugcinwe imfuno ye-steroid ngokukhawuleza, kunye nokubethelwa kwintengiso kwimakethe.
Inqaku ebalulekileyo ekufuneni; Imfuno yale steroid iphinde iphakame ngenxa yobume bayo obunobungane. Le ngenye yezinto ezimbalwa ze-anabolic steroids abangasebenzisa ngezinga eliphezulu lempumelelo. Steroids njenge Primobolan kunye Anavar zithwala kakhulu ukulinganisa izilwanyana ezenza ukuba zilungele ukusetyenziswa kwabasetyhini.
Primobolan isetyenziselwa ukuphatha izidumbu zezilwanyana ezichitha izifo kwezinye iimeko; nangona kunjalo, ngokuqhelekileyo kuphela kwiimeko ezinzima okanye apho ukukhuselwa komzimba kuyinzuzo. Le steroid ayiyi kupakisha ngobunzima obufana Anadrol or Deca Durabolin kwaye amaninzi amadoda aya kuba nokusetyenziswa kakhulu kulo mjikelezo wokukhenkceza kwexesha. Noko ke, sinokwenza okungafaniyo nabesifazane. Abasetyhini banomdla ngakumbi kwi-anabolic steroids kunye ncinane kancinci ye-anabolic steroid ingahamba indlela ende. Kubaluleke kakhulu, abaninzi abafazi abafuni ukufumana i-30lbs yesisindo ubusuku bonke. Amancinci, ukunyuka okulinganiselayo kwisisindo ngokuqhelekileyo kunokutshintsha ngokwabo. Ukugcina isimo sengqondo esicatshukileyo engqondweni, abaninzi abantu abasebenzisa le steroid kwimjikelezo yexesha eliqhelekileyo baya kudana.
Apho iPromobolan iya kukhanya ngokukodwa ukusika i-steroid. Ukuze ndi kulahlekelwa ngumzimba, kufuneka sitshise iikholori ezininzi kunokuba sisidle. Nangona kubaluleke kakhulu, le nto ibeka ubuhlungu bethu obubuthakathaka kumngcipheko omkhulu. Enyanisweni, nangona ukucetyiswa ngokuthe tye ukutya kokulahlekelwa yintlungu kuya kubangela ukulahlekelwa kwesisipha somzimba osisigxina ngaphandle kokuba umlondolozi we-anabolic usetyenziswe. Nangona ukhuselo oluncinane luya kwenzeka, okumele kukuxelele ukuba kubaluleke kangakanani i-agent anabolic. Isihluthulelo sokwenza ukutya ngokuphumelelayo akupheleli nje ukulahlekelwa ubunzima, kodwa ukulahlekelwa ngamanqatha ngelixa ukhusela ubunzima bakho bemisipha; ukuba ezi ziphelo azidibeneyo, ukutya kwakho akuphumelelanga. Ngokutya okucwangciswe kakuhle, i-Primobolan iya kunceda ufezekise le njongo. Kuye kwaboniswa ukuba nemiphumo emihle yeemeko. Abo basebenzisa iPromo bavame ukubonakala nzima kwaye bachazwa ngakumbi. Nangona kunjalo, uninzi luya kufumana i-Depot inguqu isebenze ngakumbi kwisigaba sokusika, kwaye oku kuquka nabasetyhini.
I-Primobolan nayo iyavuyiswa kakhulu kwimigangatho yezemidlalo. Ukuxhaswa ngokulinganisela ngamandla kunokwenzeka kakhulu kule steroid. Amandla angabhekisela kumandla kunye nekhawulezi, zombini izinto eziphambili ukuphumelela kwezemidlalo. Nangona kunjalo, apho le steroid iya kuba luncedo ngokwenene kukukhuthaza ukubuyiswa. Ukunyamezela kwemizimba kuya kuphuculwa kwaye ngelixa iziganeko ezinjalo aziyi kuba namandla njengoko zininzi ze-steroids, naluphi na uhlahlo olungcono kunokuba kungabikho nto. Ukongeza, njengoko i-steroid elula, umdlali akayi kuba nexhala ngamakhi amakhulu amakhulu ngobukhulu. Kwezinye iimeko, ubungakanani obuninzi obongezelelweyo bunokulimaza ekusebenzeni kuxhomekeke kwimidlalo okanye kwisikhundla. Kwamanye amaxesha, kunokuvelisa ingqalelo engaphethekiyo kumntu onamehlo aqhoshayo.
Ngethuba le-proviron isigaba sokubhikisha asiyi kuba sisiseko se-steroid, kwaye kuba amadoda amaninzi akayi kuba nenxaxheba kwimijikelezo yonyaka. Kukho okungafaniyo kwaye siya kuhamba kulabo apha. Ukongeza kwi-Proviron kunokunceda umntu aphumelele ngongoma wokunamathela ngexesha lomjikelo wakhe. Ngexesha elithile kunye nexesha kuyo yonke imijikelezo, inkqubela phambili iyaqala ukuhamba, kwaye kwezinye iimeko ziza kugqitywa ngokupheleleyo. Ngendlela iProviron iphakamisa ummandla wonke wamahhala wezinye i-steroids esetyenziswe kwisitaki, inokukunceda umntu ukuba aphumelele kule ngongoma yokunamathela. Ngethuba lexesha elingaphandle, le yilapho abaninzi baya kusebenzisa isixa esikhulu se testosterone. Abaninzi baya kusebenzisa ixabiso elikhulu ngexesha lokujikeleza kwakhona, ngokukodwa abaqulunqa umzimba, kodwa izicwangciso ezincinci ze testosterone ziqheleke kakhulu kwisigaba sokusika. Nangona kunjalo, zikhona ezo zizathu ezininzi ezikhethayo ukuqhuba iikhompyutheni zexesha elide kunye nezilingo ezincinci ze-testosterone. Kwizicwangciso ezinjalo, kubandakanywa neProviron kunokubanika i-androgen encinci. Nangona kungenakuze kubekho imfuneko kunokuba luncedo.
Ngaphandle kwembuzo ixesha elifanelekileyo lokusebenzisa i-Proviron liya kuba ngethuba lokunquma. Le steroid inekhono lokubonelela ngenye imiphumo enzima efana ne-Masteron, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba iziphumo ezinzima zenye i-steroids ziya kuphuculwa. Emva koko sijonga ingqungquthela yayo eqinileyo kwi-androgen receptor, eyokwenza ukuba umntu atshise amanqamzimba omzimba kwizinga eliphezulu kakhulu. Ukusuka apha kufuneka sicinge nge-anti-estrogen Impembelelo yeProviron. Oku kuya kuqinisekisa ukuba umntu akancinci ukugcinwa kwamanzi kwaye njengoko kuxutyushwa, kuxhomekeke kwisijikelezo esipheleleyo, kunokungayinaki imfuno yokulwa ne-anti-estrogen. Emva koko siphinde sishiywe ngokuphuculiswa kwe-testosterone yamahhala. Oku kunokuba luncedo xa amanqanaba e-testosterone ephantsi kakhulu ngeli xesha lesigaba se-anabolic steroid. Enyanisweni, ngomjikelezo ophantsi we testosterone oquka ezinye i-anabolic steroids, singathetha ngokuqinisekileyo ukuba iziphumo ezipheleleyo ziya kuba zikhulu kumntu obandakanya iPviron xa kuthelekiswa nomntu ongenalo. Ekugqibeleni, inzuzo eyinhloko yenkxaso-siseko yonyuka kunye ne -rogenicity yezinye i-steroids ezisetyenziselwa ukukhuthaza umzimba onzima nakakhulu. Kufuneka kuphawulwe ngelixa i-Proviron inokuthi ibonelele ngokuqinisekileyo ezi mpawu aziyi kubonakala ngaphandle kokuba uxhomekeke.
Iimpawu ze-3.Primobolan kunye nokuSebenza
Imizila yePrimobolan ngokuqhelekileyo ngendlela yokulahlekelwa yintlawulo kunye / okanye ukujikeleza kwemijikelezo. Iphantse ingasetyenziswanga njenge-arking or aging-gaining agent, kwaye ininzi yokusetyenziswa kwayo ifom yezilwanyana zangaphambi kokukhuphisana kwiiveki zokugqibela ezikhokelela kumdlalo wokukhuphisana okanye ukudubula kwesithombe. Ngokuqhelekileyo ibhayisekile kunye nezinye izixhobo eziphethe iimpawu ezifanayo, iipropati kunye nobomi bemizuzu. Abaninzi bemizimba bavame ukubeka i-Primobolan kunye neTestrosterone Propionate (okanye i-Testosterone Enanthate) kwaye bayisebenzise kwiiyure zokuqala ze-8 ukuze bafumane ukugcinwa kobunzima be-muscle ngexesha le-caloric intake.
Abanye abakhi bomzimba baya kwenza imiyalezo ye-Primobolan yomlomo egcinwe ngamacandelo afana nawo Testosterone Propionate kwaye I-Trenbolone Acetate, njengoko zonke iimveliso zibandakanya umsebenzi wokusebenzisana ngokukodwa apho ihlala khona isigxina. Abanye banokukhetha ukusebenzisa i-Primobolan (nokuba ngumlomo okanye injectable) kunye nehlobo oluthile lwe-Testosterone kunye Winstrol (Stanozolol), ngokuqhelekileyo ifomu engenayo ifakwe kwi-Primobolan yomlomo. Kubalulekile ukukhumbuza ukuba ungasebenzisi izixhobo ezimbini zomlomo ezahlukeneyo kumjikelezo ofanayo.
I-Oral Primobolan (i-Methenolone Acetate) kufuneka iqhutywe iqhutywe kungekho kwiiveki ze-8, kwaye ifom ye-injenjini (i-Methenolone Enanthate) ingaqhutyelwa kubude bee-10 - 12 iiveki (okanye ngaphezulu, kuxhomekeke kwiinjongo zomntu kunye neminqweno).
I-4.Primobolan Iinkalo kunye noLawulo
I-Primobolan dosayo kunye nokulawulwa kuxhomekeke kakhulu kwiyiphi ifom isetyenziswa: ngomlomo okanye injectable. Imithi yezokwelapha i-Primobolan dosages Inkcazo ye-200mg njengesilinganisi sokuqala, ilandelwa kunye ne-100mg nganye iveki ukwenzela ixesha elipheleleyo leyeza. Iimeko zonyango ezonyango ziza kugqiba ukuba yeyiphi na i-Primobolan isela epheleleyo. Uluhlu lunakho ukusuka kwi-100mg nganye okanye ezimbini kwiiveki ukuya kwi-200mg nganye kwiiveki ezimbini ukuya kwethathu. Izikhokelo zonyango kwi-oral Primobolan dosages zibiza i-100 - 150mg ngosuku ngenxa yee-6 - i-8 iiveki zokusetyenziswa okuqhubekayo.
Xa kubakho ukuphucula umzimba, i-athletics, kunye nokuphuculiswa komsebenzi, i-primobolan doers yokuqala yefomathi ye-injection iyaqala malunga ne-400mg ngeveki. Amadayimenti aphakathi kwe-Primobolan aqhelekileyo kwi-400 - 700mg ngeveki, ekufuneka ibe ngokwaneleyo ngokwaneleyo, kwaye abasebenzisi abaphezulu bangaba nokuphakama njenge-800 - 1,000mg ngeveki. Ama-Primobolan ama-dosage ngokwemigaqo yokhuseleko kunye nokusetyenziswa okuncinci kudla ngokubanzi kwi-50 - 100mg ngeveki. I-Primo engenayo ifumaneka isetyenziswe ngokuthe gqithwa kakhulu ngamabhinqa kunokuba uguquko lomlomo, luhlobo olukhethiweyo.
I-oral Oral Primobolan dosages iqalisa kwi-50 - 100mg ngosuku ngosuku lwabaqalayo, i-100 - 150mg ngosuku malunga nabaxhasi, kunye ne-150-200mg yabasebenzisi abaphambili. I-oral oral Primobolan dosages ixhotyiswa ukuba ibe phakathi kwe-50 - 70mg ngosuku, kwaye kufuneka ibonise ingozi enkulu yokuhlaselwa.
I-Prim ye-Oral kufuneka ilawulwe kanye ngemini kungekho mfuneko yokwahlula ama-dosage yonke imihla, njengoko isigxina-ubomi salo malunga neentsuku ze-2 - 3. I-Primobolan Injectable ibonisa ubuncwane bemihla ye-7 - iintsuku ze-10 ngenxa ye-Enanthate ester, kwaye kufuneka ilawulwe kabini ngeveki, kwaye ijoyi ngalinye lihlukaniswe ngokulinganayo, ukuze kugcinwe amazinga eplasma ezinzileyo kunye negazi.
5.Primo yokuBhikisha okanye ukuCoca
I-Primobolan yenye yezinto ezimbalwa ze-steroids ezilungele ukumbumba kunye nokusika. Inyaniso iyatshelwa, akukho zinto ezinjalo "bulking steroid"Okanye"ukusika i-steroid"Yile nto enye eyenza ukugcinwa kwamanzi ngaphezulu kunabanye. Oku kungasebenza kumsebenzi wakho ukuba ukhangele ukubeka isisindo (nokuba ubunzima bamanzi) ukwenzela ukuba umzimba wakho ulungelelwe ubuninzi. Yaye umvakalelo wokuhlambalaza kwiikhatile zakho zeekhati ziyakonwaba. Kodwa ngaphaya kokugcinwa kwamanzi, ukuxubha kunye nokusika kunomdla wokutya. I-Primo ayiyi kuvelisa ukunyuka okukhawulezileyo kwisisindo somzimba ngokwawo, kodwa ukuba iikhalori zinyuswe izidakamizwa ezimangalisayo zokubhukuda ngaphandle kwe-bloat. (Yintoni abanye abantu ababiza ngokuba "inqwaba eqhelekileyo"). Ngokuqinisekileyo, kwi-calmo deficit Primo iya kudala ukukhula kwemisipha, okwenza ibe yinto enqwenelayo kumalungu omncintiswano omzimba kwiiveki ezimbalwa zokugqibela ngaphambi komncintiswano.
Eyona njengaye njenge-Primo, abaninzi abantu banomuva wokuba badinga ukukhaba iteksi ngokungongeza into enamandla kwaye ngokubhekiselele kulo, i-Primo kulula kakhulu ukuyibeka kuba ihamba nayo nayiphi na into. Akukho ziphikisana nezinye i-steroids kunye nantoni na enye oyisebenzisayo, i-Primobolan iya kwandisa impembelelo enkulu ye-anabolic kuyo. Okukhethwa kuninzi kunengqiqo kunye nePramo kuya kuba yi-testosterone. Uvavanyo luhamba kunye nayo yonke into kunye nokudibanisa kukuwine. Akunalo i-androgenic ngokukhethekileyo (nangona kunjalo, njenge-steroids, isekelwe kwi-moletocule ye-testosterone) I-Primobolan isenokubangela ukuxinwa okuthile ekubeni ikhwalithi ye-androgenic iya kuba yaneleyo yokukhupha kodwa ayikho phezulu ngokwaneleyo ukuba yongeze ngaphezu kokuba umzimba uza kuvelisa . Le ngenye yezigxeko ze-Primo. Ukukhula okuphezulu, ezinye i-androgen ukuphakama kuyadingeka. Ukuncitshiswa kokunyanzeliswa kunye nokungabikho kwe-androgen yokutshintshwa kungaholela ekulahlekeni okuncane kwe-libido. Ukongeza i-testosterone encinci ivuselela ukuba i-pitfall ingabikho kunye nokwandisa ukwakhiwa kwezixhobo zomzimba. Zonke zombini i-steroids zinika zonke izinto ozifunayo kwaye zifuna kumjikelezo. Ukufakela ezininzi izilwanyana ezinobungozi ngokuqhelekileyo akudingekile.
Ukuba ufuna i "kick start" ukuba ujikeleze u-Primo uphinde utyane ngokukodwa ngokuzenzekelayo ngokukhawuleza. Xa usebenzisa i-Primoboaln kunye no-Dianabol uza kufumana impembelelo yokuqala ye-D-bol kunye ne-muscle eqinile eyakhayo kwi-Primo. Yona nto ibhetele kwihlabathi. Kodwa xa usebenzisa umlomo, NGONYAKA usebenzisa izixhobo ezikhuselekileyo zokukhusela isibindi. (I-N2GUARD, i-Protein Factory POST- CYCLE kunye ne-LIV 52 ziphakathi kwezona zilungileyo kunye ezithandwa kakhulu. I-rumor inaloo nto u-Arnold athathe i-100mg shot ye-Primobolin ngosuku kunye ne-25mgs i-dianabol ithebhu ngosuku. Kwaye kuthathwa njengophoxisa imvulophu "ngosuku" nangona imigangatho yanamhlanje ibumnandi. Kwakhona lihle kakhulu. Ukuncoma komnye omnye kunye kwaye unako ukufumana ubungakanani besayizi kunye nomthamo wegazi kunye nokugcinwa kwe-nitrogen ephezulu kunye nokhuseleko oluthile.
I-Primo ithathwa njengona khetho olukhethekileyo kwabasetyhini ngenxa yeempawu zayo eziphantsi kunye neenzuzo ezihambelanayo. Abafazi bathanda ukufuna ukuphepha ukugqithisa ngokugqithiseleyo kunye nokugqithisa okuvela ekugcinweni kwamanzi. Kwakhona, ekubeni i-estrogen idala i-look "esithambileyo", i-steroids ukuba i-aromatize inokutshabalalisa ubuchule bokuzama ukufezekisa. Esinye isidakamizwa esenza ubunzima ngaphandle kokuqhaqha okanye i-estrogen buildup yi-Masteron, kodwa i-Masteron i-androgen ecocekileyo. Oku kunokukhokelela kwimiphumo yecala lomntu ininzi labesetyhini bafuna ukuphepha - ukulahleka kweenwele, ukukhula kweenwele zomzimba, isikhumba esinzima, ilizwi elijongeyo kunye nokuphazamiseka okukhulu, ukwandiswa kwe-clitoris. Ekubeni i-Primo iphantse ibe yi-anabolic, la macala aya kugcinwa ubuncinci obukhulu ukuba ama-dosages agcinwa ngokufanelekileyo. Abasetyhini bavame ukuphendula kakuhle kwi-50-100mg ngeveki, nangona abaninzi bekhetha iinguqulelo zomlomo abazivakalayo kukutshisa amafutha, nangona oku kuthethwa ngokucacileyo kunye ne-anecdotal. Akukho bu bungqina obubonisa ukuba lukhulu, kodwa ubungqina obunobungqina bungafanelekanga.
Ukongezelela, elinye ibhinqa likhetha ukuquka ezinye i-anabolics ezifana neWinstrol okanye i-Anavar, kodwa le nto iphela. Ukuxuba kakhulu i-steroids ayinayo inzuzo kwaye inokuba yingozi ngenxa yokuba iyacaca eyona isebenzayo. Ukuba uthanda u-Primoblan, sebenzisa i-Primobolan. Ngokukodwa kwimeko yowesifazane, ngokuqhelekileyo akukho mfuneko yokongeza. Isiphakamiso esithandwayo sabasetyhini siya kuba ngowokuqala ukuzama ukusebenzisa i-Primobolan ngokwakho, kwaye kamva uqhube kwi-steroid yesibili ukuba kuyimfuneko.
Into yokuqala yokuyiqonda kunye ne-Primobolan kukuba yi-DHT-derivative, oku kuthetha ukuba ifom ye-DHT (Dihydrotestosterone) iguquliwe. Ngaloo ndlela, ihamba nezinto ezifanayo kunye neempawu ezifanayo, kubandakanya ukungakwazi ukuguqula (i-aromatize) kwi-Estrogen nayiphi na idosi esetyenzisiweyo. Oku kufanele ukuba yiyona nto iyathuthuzelayo kubantu abaninzi abanomdla Iziphumo zecala lase-Estrogenic, njenge-bloating, gynecomastia, uxinzelelo lwegazi oluphezulu ngenxa yokugcinwa kwamanzi, njl.
Nangona ifomati yomlomo ye-Primobolan yi-C-17 Alpha Alkylated (eyaziwa nangokuthi yi-Methylation), yinkqubo eyenza ukwenza ama-oral compounds ibe nenani elibi kwisibindi, i-Primobolan akakaze ibonise nayiphi na imiphumo yokulinganisa i-hepatotoxic emzimbeni. Nangona i-Primo yomlomo ayifaki nayiphi na imiphumo engalinganisanga kwisibindi, isabonisa inani elincinci le-hepatotoxicity kwaye oku kuya kufuneka kuqondwe, ngakumbi xa kuthethwa ubude bomjikelezo obanzi kunye / okanye i-dosage ephezulu kakhulu. Xa kuthethwa oko, ukufa omnye kwesigulane esiphelelwe ngumlomo oye wachazwa ngomlomo we-Primobolan uye wadibaniswa nokusetyenziswa kwawo. Kwakhona, amaqondo aphakamileyo kunye / okanye ubude bemijikelezo yomlomo we-Primobolan yomlomo inokuba yinkxalabo.
Njengoko i-Primobolan iqhutywe ngabadlali kunye nabakhi bomzimba njengento "enobubele" i-anabolic steroid, iyakubonisa ukuxothwa kwe-Testosterone yokuvelisa kunye nomsebenzi we-HPTA. Enyanisweni, uphando luye lwaqinisekisa ukuba kwimizuzu ephantsi kakhulu (i-30 - 45mg yemihla ngemihla), izifundo zokuvavanya zifumene i-15-65% yokunciphisa i-Testosterone yokugcina yemvelo (9]. Ukuba loo mayeza aphantsi kakhulu kunokuba kufunwa ukwenzela ukuphucula ukusebenza, iyanconywa kakhulu ukuba kwenziwe iPCT efanelekileyo (iTrans Cycle Cycle) emva kokucinywa kwe-Primobolan.
9.Kuphi uthenge iPromobolan yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi?
Unokufumana umthombo omkhulu we-Primobolan powder online, kodwa kunzima ukuthenga i-Primobolan yangempela eluhlaza kwi-intanethi. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthenga i-Primobolan impahla eluhlaza kwi-intanethi, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
Ngaba abafazi banokuthatha i-Primobolan (i-Methenolone Acetate)?
I-testosterone i-acetate powder: nceda ungayisebenzisi ukuba ungazazi ezi zinto!	I-Proviron yinto ekhethekileyo ye-anabolic steroid ekujikelezeni imijikelezo